Sawirro: Safaarada Somalia ee Malaysia oo la galay iyo madax-banaanidii qaranka oo lagu xadguduby kadib… | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Sawirro: Safaarada Somalia ee Malaysia oo la galay iyo madax-banaanidii qaranka oo...
Sawirro: Safaarada Somalia ee Malaysia oo la galay iyo madax-banaanidii qaranka oo lagu xadguduby kadib…
Khilaaf xoog leh ayaa hareeyay Safaaradda Soomaaliya ee ku taalla magaalada Kuala Lumpur oo ah xarunta dalka Malaysia, waxaana shaqo joojin sameeyay dhamaan xubnihii ku xigay Safiirka ee Safaaradda Malaysia.
Warar ay heshay Badweyn Online ayaa sheegaya in shaqada ay joojiyeen Qunsul Cabdifitaax, xoghayaha koowaad ee Safaaradda Marwo Qamar, uqeybsanaha dhanka ganacsiga ee Safaaradda Maxamed Amiin, u qeybsanayaasha waaxda socdaalka Mubarak iyo Zakariye iyo uqeybsanaha dhanka waxbarashada kadib markii ay sheegeyn in ay la shaqeyn waayeen Safiirka Soomaaliya ee Safaaradda Amabssador Mardaadi.
Shaqaalaha Safaaradda ayaa sheegay in lacago xad-dhaaf ah Ardayda iyo muwaadiininta kale ee ku sugan dalkaasi laga qaado, taas oo aysan awoodin bixinteeda waxaana isa soo taraya walaaca ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Malaysia.
Todobaadyo ka hor Booliiska dalka Malaysia ayaa gudaha ugalay Safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia kadib markii qof u dhashay dalkaasi uu sheegay in gudaha safaaradda loogu gacan qaaday kadibna uu ku wargeliyay Booliiska Malaysia. taas oo sababtay Booliiska ay gudaha u galeen Safaaradda Soomaaliya.
In Safaaradda Soomaaliya ee Malaysia la galo waxay dhaawac ku tahay Madaxbanaanida dalka walina ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Dowladda Soomaaliya.
Xeerka Vienna ee 1961, ayaa qaba in cidna aysan geli karin safaarad haddii uusan raali ka ahayn safiirka. Si kale haddii loo dhigo, safaaradaha waa sida dalal yar oo ku dhex-yaalla dal, waxaana safiirka iyo diblomaasiyiinta ay haystaan xasaanad buuxda oo xitaa ana dambi lagu soo oogi karin.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Malaysia Ambassador Mardaadi waxa uu kamid yahay dhowr safiir oo Wasaaradda Arimaha Dibadda Soomaaliya maalmo ka hor ugu yeertay in ay si deg deg ah u yimaadaan magaalada Muqdisho si wax looga waydiiyo shaqooyinka ay haayaan.
Previous articleBIG NEWS:Madaxda Soomaaliya oo wado in dacwada Badda Kenya Oga badalato arin kale oo soomaalida dhexdeeda ah
Next articleSawirro: Cabdirashiid Janan oo garoon diyaaradeed loogu magac daray
Xildhibaanadii Ahlu Suna Ee Gadooday Oo La Xaliyay & DF Oo Xeelad Cusub La Soo Baxday
Cumar Filish oo magacaabay gudoomiye degmo xili uu wajahayo cadaadis daran
XASAASI: Al-Jazeera oo shaacisay fadeexad culus oo kusoo baxday qoyska Siilaanyo
DHAGEYSO: Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo ka hadlay Khudbadii Farmaajo
Akhriso: 3-Qodob oo Beesha caalamka cadaadis ku saaraya DF & M/goboleedyada
Odayaasha Galmudug oo bilaabay soo xulista Xildhibaanada cusub & kheyre oo ku Fashilmay liiska….
Isku-deyga dil ee Jeneraal Odowaa iyo hadalkiisii hore oo abuuray tuhun halis ah
Shabab oo maxkamad soo taagtay askari ka tirsan DF iyo qaab yaab leh oo loogu soo celiyey gurigiisa
Zahra Naaleeye: “Soomaaliya 30-kii sano ee u dambeeyay waa yaraaday gudniinkii gabdhaha”